Amerika Latina · Desambra, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Desambra, 2016
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Desambra, 2016
Mampiseho ny Lanonana Fampihavanana ao Kolombia fa ny Vahoaka no Mametraka ny Fihavanana, Fa tsy ny Fifanekena
Kolombia 31 Desambra 2016
"Mila fihavanana izahay ary handeha hanangana izany. Milokaloka izahay fa hanangana fihavanana "
Topimason'ny Lafiny Mampihomehy Amin'ny Krismasin'i Amerika Latina Ao Amin'ny YouTube
Arzantina 28 Desambra 2016
Hehy: Iray amin'ny singa lehibe indrindra amin'ny fankalazana ny krismasy amerikana latina.
Meksika 19 Desambra 2016
Afrika Mainty 18 Desambra 2016
Amerika Avaratra 16 Desambra 2016
Mihaona Ivelan'ny Aterineto ireo Mpikatroka Nomerika Hampiroborobo Ny Fimaroam-Piteny Antserasera Ao Bolivia
Bolivia 16 Desambra 2016
Mahatonga ny firenena hanana kolontsaina sy fiteny isan-karazany ny teny ofisialy miisa 37 ao Bolivia. Na dia izany aza, tsy voatery hita foana ao amin'ny aterineto izany fahasamihafana izany.
Venezoela 16 Desambra 2016
Nandritra ny efa ho 20 taona teo, Lasa anton-dresaka sy tsy maintsy jerena isan-kerinandro tao Venezoela ireo kisarisary ara-politikan'i Rayma Suprani. Fa tsy tia azy ireny ny governemanta Maduro ka nanery azy handeha hanao hiaina an-tsesitany.
Fomba iray Handikàna ny Fifidianana Filoham-pirenena any Nikaragoà: ‘Demokrasia Tsy Misy Fifanarahana’
Nikaragoa 11 Desambra 2016
"Tsy mitarika ho amin'ny fifampiresahana io kabary io, ary tsy miteraka fientanana eo amin'ny fitondrantenan'ny olom-pirenena."